2nd quarter 2075-76(2nd quarter 2075-76) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
महालक्ष्मी विकास बैंकको खूद नाफा घट्यो, संचालन मुनाफातर्फ ४४३% को छलाङ
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा महालक्ष्मी विकास बैंकको खूद नाफा घटेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा खूद नाफा करिब ४ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा २० करोड ५४ लाख रहेको नाफा घटेर यो वर्ष १९ करोड ७६ लाखमा सीमित भएको हो । बैंकको संचालन नाफामा भने ४४३.१९ प्रतिशतको छलाङ मारेको छ । अघिल्लो वर्षको...
अधिकांश सूचकमा एशियन लाइफको प्रगति, जीवन बिमाकोष झनै बलियो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ७३ करोड बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको यस्तो आर्जन १ अर्ब २१ करोडमा सीमित थियो । कम्पनीले लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट हुने आय समेत वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ४४ करोडमा सीमित यस्तो आय बढेर यो वर्ष ६५ करोड १५ लाख माथि पुगेको हो...
नेशनल लाइफको खूद बिमाशुल्क आर्जनमा २१.३८% फड्को, रिजर्बमा १४३.६३% को छलाङ
काठमाण्डौ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले प्रिमियमबाट हुने आम्दानीमा २१.३८ प्रतिशतले बढाएको छ । यो कम्पनीले अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा २ अर्ब ४५ करोड रहेको यस्तो आम्दानी बढाएर २ अर्ब ९८ करोडको उचाई चुमाएको हो । कम्पनीको खूद दाबी भुक्तानी समेत बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ७१ करोड ६५ लाखमा सीमित दाबी भुक्तानी ६४.८६ प्रतिशतले बढेर यो...
प्रभू इन्स्योरेन्सको बिमाशुल्कतर्फको आर्जन बढ्यो, रिजर्बमा २८७% को छलाङ
काठमाण्डौ । प्रभू इन्स्योरेन्स लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा २० करोड ८३ लाख बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो आम्दानी १८ करोड १३ लाखमा सीमित थियो । कम्पनीले यो अवधिमा ३६ हजार ४९६ बिमा लेख जारी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ३५ हजार २०८ बिमालेख जारी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा प्रभू इ�...
रिलायन्सको बिमाशुल्क आर्जन २०.९३ करोड, नाफामा गिरावट
काठमाण्डौ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा २० करोड ९३ लाख बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको यस्तो आर्जन ६१ लाखमा सीमित थियो । कम्पनीको २ लाख ८७ हजारमा सीमित लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट हुने आय बढेर १ करोड ८ लाखको उचाईमा पुगेको छ । यो अवधिमा कम्पनीले ४ लाख ६ हजारको मात्र दाबी...
ज्योति लाइफको बिमाशुल्क आर्जनमा झिनो प्रगति
काठमाण्डौ । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा ३० करोड ९१ लाख बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बिमा शुल्क आर्जन २९ करोड २३ लाखमा सीमित थियो । अघिल्लो वर्ष १४ लाखमा सीमित लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट हुने आय बढेर २ करोड २ लाखको उचाईमा पुगेको छ । यो अवधिमा कम्पनीले ५ लाख...
आम्दानी घटेपछि दूरसंचार कम्पनीको खूद नाफामा १५.२५% को गिरावट
काठमाण्डौ । नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमीटेडको खूद नाफा घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा यो कम्पनीले ६ अर्ब ३४ करोड नाफा आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा ७ अर्ब ४८ करोड रहेको थियो । यो हिसाबले खूद नाफा १५.२५ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको दोश्रो त्रैमासको तुलनामा रिजर्ब २०.७८ प्रतिशतको फड्को मारेको छ । अघिल्लो वर्ष ७५...
अघि बढ्दै सिभिल बैंक: खूद र संचालन नाफा, ब्याज आम्दानीमा लोभलाग्दो फड्को
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा वितरणयोग्य मुनाफातर्फ १०.५४ प्रतिशतको प्रगति गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा २१ करोड ६९ लाख रहेको यस्तो नाफा बढेर २३ करोड ९८ लाखको उचाईमा पुगेको हो । बैंकले खूद नाफातर्फ भने ४९.७९ प्रतिशतको छलाङ हानेको छ । अघिल्लो वर्ष २४ करोड १ लाखमा सीमित यस्तो नाफा बढेर ३५ करोड...
चिलिमे हाइड्रोका अधिकांश सूचकमा पहिरो
काठमाण्डौ । चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमीटेडको चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा अधिकांश मुख्य सूचकमा पहिरो गएको छ । यो कम्पनीको रिजर्ब, बिजुली बिक्रीबाट हुने आम्दानी, संचालन नाफा, करपछिको नाफा, इपीएस, नेटवर्थमा गिरावट आएको हो । यो कम्पनीको करपछिको मुनाफामा १३.६३ प्रतिशतको गिरावट भएको हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ५२ करोड ४६...
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको सुस्त चालः निक्षेप परिचालन घट्यो, एनपिएल बढ्यो
काठमाण्डौ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा वितरणयोग्य मुनाफामा सामान्य मात्र प्रगति गरेको छ । यो बैंकले अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ९५ करोड ९४ लाखमा सीमित फ्री प्रफिट ४.०३ प्रतिशतले बढाई ९९ करोड ८१ लाखमा पुर्याएको हो । बैंकको खूद नाफा ६.७९ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ७ करोडबाट बढेर १ अर्ब १४ करोडको...
बीओकेको फ्री प्रफिटमा १९.८९% को फड्को, बढ्दै खराब कर्जा !
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा वितरणयोग्य मुनाफामा १९.८९ प्रतिशतको प्रगति गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ५५ करोड १५ लाखमा सीमित यस्तो नाफा बढेर ६६ करोड १३ लाखको उचाईमा पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष ५५ करोड १५ लाखमा सीमित खूद नाफा बढेर यो वर्ष ७३ करोड ७५ लाखको उचाईमा पुगेको छ । यो भनेको...
सानिमा माई हाइड्रोको नाफामा ५.०३% को प्रगति
काठमाण्डौ । सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमीटेडको खूद नाफामा सामान्य प्रगति भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अवधिमा यो कम्पनीको खूद नाफा अघिल्लो आबको यही अवधिको तुलनामा ५.०३ प्रतिशतले बढेको हो । आयकरपछिको कम्पनीको खूद नाफा २२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ, अघिल्लो वर्ष २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा बिजुली...
सोल्टी होटलको नाफामा ९७.०७% को फड्को, इपीएस रु. ४.५५ मात्र
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा सोल्टी होटल लिमीटेडको खूद नाफा ९७.०७ प्रतिशतले बढेको छ । मुख्य व्यवसायमा बिस्तार हुँदा बैंकको नाफा अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ७.६९ करोड रहेकोमा बढेर यो वर्ष १५.१६ करोडको उचाईमा पुगेको हो । समीक्षा अवधिमा होटलले ८८ करोड ५ लाख आम्दानी गर्न सफल भएको छ । यो अवधिमा खर्च ६८ करोड ८७ लाख रहेको छ...